Uhlobo olusha lweKdenlive 19.04 lufika futhi lezi yizindaba zalo | Kusuka kuLinux
Muva nje Uhlobo olusha lomhleli wevidiyo weKdenlive 19.04 lukhishwe ngokuthuthuka nokulungiswa okuningana. Okuyinhloko yazo futhi maqondana neTow, ngakho-ke iKdenlive 19.04 entsha iza njengengxenye yezicelo ze-KDE 4.19.
UKdenlive ungumhleli wevidiyo wamahhala ovulekile omangalisayo kwe-GNU / Linux neFreeBSD, okuyi isekela i-AVCHD, i-DV ne-HDV, futhi ithembele kwamanye amaphrojekthi wemithombo evulekile efana ne-FFmpeg, uhlaka lwevidiyo ye-MLT, kanye nemiphumela ye-frei0r.
Le phrojekthi yaqalwa nguJason Wood ngonyaka we-2002, futhi namuhla igcinwa yithimba elincane labathuthukisi, futhi ngokukhishwa kweKdenlive 15.04.0, ngokusemthethweni yaba yingxenye yephrojekthi esemthethweni ye-KDE.
Manje, isibuyekezo esikhulu sesihleli sevidiyo seKdenlive siyatholakala.
1 Izindaba eziyinhloko zeKdenlive 19.04
2 Ungayifaka kanjani iKdenlive 19.04 ku-Linux?
Izindaba eziyinhloko zeKdenlive 19.04
Ngalokhu kukhishwa okusha kwabasebenzisi beKdenlive 19.04 bangalindela ukuthuthuka okuncane okuningi, okwenza lula ikakhulukazi sebenza ngomugqa wesikhathi, imiphumela, nesihleli sesihloko.
Umugqa wesikhathi manje uhlukanisa phakathi kwamathrekhi alalelwayo ne ividiyo. Abasebenzisi bangakhulisa usayizi wethrekhi ngawodwana besebenzisa ukuhudula nokudonsa.
Amathrekhi womsindo ahlinzeka inkinobho ukuqala ukurekhoda komsindo kuthrekhi ehambisanayo.
Uma kudingeka, iziqeshana ezikhethiwe zingahanjiswa ngekhibhodinoma. Iziqeshana emugqeni wesikhathi zingashintshwa phakathi kwamaphrojekthi ngekhophi nokunamathisela futhi (okwesikhashana) kucishwe ngokuphelele.
Amafreyimu angukhiye adalwa ngokuchofoza kabili futhi angahanjiswa negundane. Inani lozimele ongukhiye liyashintsha lapho iphuzu lehange lihanjiswa kulayini webhendi.
Abathuthukisi babuyekeze umphumela "wejubane".
Abasebenzisi bangasetha imiphumela abayithandayo bese beyifinyelela ngokushesha. Yonke imiphumela ebingasasebenzi kahle bekufanele ivele ebhodini.
Isihleli sesihloko sinikeza imihlahlandlela elungisekayo, ingemuva lingashintshwa phakathi kwamaphethini we-checkerboard nombala omhlophe noma omnyama.
Abathuthukisi bathuthukise ukuphatha kwe-Project Bins kanye nabaqaphi (ukubuka kuqala). Phakathi kwezinye izinto, abasebenzisi bangabonisa imihlahlandlela ehlukahlukene.
Izinsizakusebenza, njenge izifanekiso zezihloko nokunikezela ngamaphrofayli manje kungalandwa kumawindi engxoxo ahambisanayo.
Ukunikezwa i-hardware iyashesha futhi ingemuva elibonakalayo. Yomibili le misebenzi isathathwa njengokuhlolwa.
Ekugcineni, uhlelo lokuhlela lusebenza ngokuzinza futhi lushesha ngokwengeziwe, futhi onjiniyela basuse izimbungulu eziningi. Imininingwane enikeziwe ngesimemezelo esisemthethweni.
Ungayifaka kanjani iKdenlive 19.04 ku-Linux?
Okwalabo abanentshisekelo yokukwazi ukufaka le nguqulo entsha yeKdenlive 19.04 ku-disto yabo, Kufanele ulandele imiyalo esabelana ngayo nawe ngezansi.
El indlela yokuqala yokufaka yalolu hlelo lokusebenza olusebenza cishe kunoma yikuphi ukusatshalaliswa kwe-Linux Kungenxa yamaphakeji we-Snap.
Okuwukuphela kwesidingo ukuthi i-distro yakho inokwesekwa kwala mapakeji.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Uhlobo olusha lweKdenlive 19.04 lufika futhi lezi yizindaba zalo
UCesar de los RABOS kusho
Kuhle kakhulu ukuphela komhleli osele, ngokubukeka okuncane! I-OpenShot ingenye enhle kakhulu, yize ingohlobo lohlobo lokwakha ama-movi… kunalokho itakulwa kwi-KDE embi, iya ngokuya iba mubi, ihamba kancane futhi ngaphandle kokuhlanganiswa okulungile kwezinhlelo zokusebenza njengoba yayinjalo ngaphambili ne-konqueror.
Phendula uCésar de los RABOS
UDaniel Hernandez kusho
Ngifuna nje ukungasebenzi kahle kweKdenlive. Ngivuselelwe futhi okokuqala, ngikuthola kunzima ukuzivumelanisa nevidiyo ehlukaniswe nomsindo ngokuzenzekelayo, kodwa okubi kakhulu ukuthi iKdenlive yami iqina phakathi nokuhlela. Ngifuna indlela yokubuyela enguqulweni edlule.
Phendula uDaniel Hernandez